'Haweeneey Hindi ah oo lagu qasbay in ay guursato nin Pakistani ah' ayaa dalkeeda dib ugu laabatay - BBC News Somali
'Haweeneey Hindi ah oo lagu qasbay in ay guursato nin Pakistani ah' ayaa dalkeeda dib ugu laabatay
Lahaanshaha sawirka Ravinder Singh Robin
Image caption Uzma Markii ay joogtay Hindiya ka hor inta aysan Pakistaan aadin
Haweenay u dhalatay dalka Hindiya oo nin Pakistan u dhashay ku eedaysay in uu ku guursaday qori caaraddii ayay maxkamad Islamabad ku taalla ka aqbashay codsi ay u soo gudbisatay oo ahaa in ay ku laabato dalkeeda.
Haweeneydan oo magaceeda lagu soo koobay Uzma ayaa iyadoo ay galbinayaan saraakiil sare oo Hindi ah ka gudubtay xadka Wagah.
Ninkeeda Tahir Cali ayay ku eedaysay inuu u geystay jirdil, hasayeeshee ninkeeda oo diiday eeda ay u soo jeedisay xaaskiisa ayaa ku tilmaamay mid aan dhab ahayn.
Dhacdadaan ayaa imaaneysa ayadoo ay sii kordhayaan xiisadda u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Hindiya Sushma Swaraj ayaa maanta barteeda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ku soo dhaweyneyso dib u soo noqoshadeeda.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa soo galbiyay Uzma oo Labaatan sano jir ah, ilaa iyo intii ay ka gudbaysay xuduudda, subaxnimadii hore ee saaka, waxayna rajayneysaa inay gaarto gurigooda oo ku yaalla magaalada Delhi.
Dib u soo noqoshada Uzma ayaa imaaneysa xili ganacsiga Hindiya iyo Pakistan uu hareeyay eedaymo rabshado wata oo ka dhex taagan labada dal taasoo ku salaysan gobbolka lagu muransan yahay ee Kashmir oo la haanshihiisa ay labada Waddanba sheegtaan.
Xiisadaha ayaa sidoo kale cirka isku sii shareeray ka dib markii ay Pakistan xukun dil ah ku xukuntay Kulbhushan Jadhav oo u dhashay dalka Hindiya isagoo lagu eedeeyay basaasnimo.
Warbaaahinta ayaa sidoo kale baahisay, in Haweeneydaan Uzma ay Tahir Cali kula kulantay dalka Malaysia, waxayna u wada safreen dalka Pakistan horaantii bishan halkaas oo ay sheegtay in lagu qasbay guurka saddexdii biishan May.
12-kii bishan waxaa ay dacwad u gudbisay Maxkamadda sare ee Islamabad iyadoo seygeeda ku eedeyneysa inuu u gaystay dhibaato iyo cabsigelin.